Sababta ay muhim u tahay inaadan DHAYALSAN caabuqa corona da’ kastaba jire | Hadalsame Media
Home Caafimaadka Sababta ay muhim u tahay inaadan DHAYALSAN caabuqa corona da’ kastaba jire
Sababta ay muhim u tahay inaadan DHAYALSAN caabuqa corona da’ kastaba jire
(Hadalsame) 31 Maarso 2020 – 1918 waxaa dunida ka dillaacay cudur Fayras ah, inkasta oo sida uu ku bilaamay iyo halka uu kasoo farcamay warbixinno is diiddan laga sheego, haddana waxaa loo badanyahay, in uu ka dillaacay Xero ciidamada Milateriga Maraykanku leeyihiin oo ku taalla gobolka Kentucky.
“Spanish Flu” ama Hargabkii Ispaanishku, wuxuu dunida ku dilay 50 Milyan oo qof, wuxuuna ku dhacay 500 Milyan oo qof.
Maraykanka qudha dadka kaga dhintay, waxay ka badan yihiin, guud ahaanba marka la isku daro intii kaga dhimatay ”dagaalkii 1’aad, dagaalkii 2’aad, dagaalkii Vietnam, Afghanistan, Ciraaq, 11 September”
Cudurkii Spanish Flu oo Jiir/Doolli kaga soo tallaalmay Bani aadamka iyo kan Coronvirus oo la leeyahay Bissad/Yaanyuur/Fiidmeer ayuu kasoo gudbay, waxay isaga mid yihiin, in labaduba sida Hargab/Dureyga oo kale uu dadka ugu dhacay, fudaydka iyo dhakhso ku faafkoodana waa isku mid.
Coronvirus ma aha cudur la dhayalsan karo, waa cudur safmareen ah oo aan cidna dhaafeyn, madax iyo maato, Muslim iyo gaal.
Inkasta oo uu dadka waaweyn ee xannuunada hore qabay uu faro ba’an ku hayo, haddana macnaheedu ma aha in uu dhalinyarada u naxariisanayo.
Dhalinyaro badan oo 21-30 jir u dhaxeeya oo aan Cudurro hore qabin ayuu Sweden ku laayay, 31 jir Soomaaliyad oo xaamilo ah ayuu galaaftay ”Haweeenka ilmaha caloosha ku sida waa dadka loo baqayo ee u baahan ilaalada dheeriga ah”, sidoo kale carruur yaryar oo adduunka bilo joogay ayuu laayay.
Si kasta oo Basharku isku bido awood, heer kasta iyo horumar kasta oo uu gaadho, waa daciif, in awood ka sarreysa jirto ayaa la ina xassuusinayaa, masiibooyinkaas ayaa wax laga baranayaa, dedaal iyo duco, dhawrsanaan iyo in naftu waa ammaanee la ilaaliyo ayaa loo baahanyahay.
Cudurkan ha dhayalsan, ma aha wax laga dhigan karo maadeysi, inta aad taxaddari karto taxaddar, joog gurigaaga, iska naso oo wakhti la qaado qoyskaaga, hana usoo xareynin Fayras naftooda galaafta.
Waxaa Diyaariyey: Khaliif Faarax Xayir
Previous articleYAA LA HOR DAWAYNAYAA? Dawaynta dadka ma da’da ayaa loo eegayaa? (Arag hab-raaca caafimaad ee ay Sweden ka dejisey Covid-19?
Next articleTurkiga oo sameeyay mashiin muhim u ah la dagaallanka Covid-19